Madaxweyne Farmaajo oo xarigga ka jaray Garoonka caalimiga ah ee Garoowe+Sawiro - Latest News Updates
Madaxweyne Farmaajo oo xarigga ka jaray Garoonka caalimiga ah ee Garoowe+Sawiro
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xariga ka jaray Garoonka caalamiga ah Jeneraal Maxamed Abshir Muuse ee magaalada Garoowe, kadib munaasabad ka dhacday Garoonka dhexdiisa.
Munaasabadda lagu daahfurayey Garoonka cusub waxaa kasoo qeybgalay, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland, Madaxweyne ku-xigeenka Dowlad Goboleedka Puntland, Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland, Xildhibaanno katirsan Baarlamaanka Federaalka iyo Aqalka sare, Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka Dowlad Goboleedka Puntland, Wasiirro heer Federaal iyo kuwo Dowlad goboleed, marti, masuuliyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Madaxweynaha JFS Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadal ka jeediyey munaasabadda ayaa sheegay in hirgelinta mashruucan uu ka turjumayo horumarka iyo dib-udhiska Soomaaliya ka socda.
“Dowladnimada aan dooneyno ayaa ah mid ay saldhig u tahay taageerada shacabka, maantana waxaa caddeyn muuqata u ah sida shacabka Puntland ay uga wada qeyb qaateen dhismaha garoonkan, ganacsatada, salaadiinta, culumada iyo dhammaan qeybaha bulshada, waana taageerada lagama maarmaanka u ah dowladnimada.”
Sidoo kale, wuxuu Madaxweynaha JFS sheegay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay dhiirigelinayso waxna ka qaban doonto horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka.
“Deeqaha aan ka helno caalamka waa kuwo laga soo ururiyey dad idinkoo kale ah. Waxay ku timaadaa dhaqaale ururintu in shacabku ay ku kalsoonaadaan dowladdooda, anagana waxaa waajib nagu ah in aan kalsoonidaas ka dhabeeyno oo aan hirgelinno waxa ay naga sugayaan shacabka Soomaaliyeed.”
Gaba-gabadii munaasabadda daah furka garoonka magaalada Garoowe ayuu Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu shahaado sharaf dhiirri gelin ah guddoonsiiyey Madaxweynaha dowlad Goboleedka Puntland Mudane Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo ku aaddan sida uu u hormariyey kaabayaasha dhaqaalaha Puntland.